‘तीस काटेपछि नियमित मुटु परीक्षण आवश्यक’ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘तीस काटेपछि नियमित मुटु परीक्षण आवश्यक’
२०७० फाल्गुन ९, शुक्रबार ०३:०३ गते
नारायणगढ । मुटु कहाँ हुन्छ ? धेरैले भन्ने गर्छन् छातीको देब्रे कुनामा । गीत र कवितामा यस्तै पढ्न सुन्न पाइन्छ । तर चिकित्सकहरु भन्छन् ‘मुटु छातीको बीच भागमा हुन्छ ।’ बीचमै हुन्छ भन्ने किन थाहा पाउनु प¥यो ? चिकित्सकहरु भन्छन् ‘थाहा पाउन आवश्यक छ ।’
नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान चितवन, नारायणगढ लेडिज जेसीज र ब्रह्मी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिको संयुक्त आयोजनामा बुधबार नारायणगढमा भएको मुटु रोगसम्बन्धी कार्यक्रममा चिकित्सकहरुले मुटु रोगबाट जोगिन आवश्यक हुने ज्ञानका बारेमा प्रकाश पारेका हुन् ।
मुटु शरीरको महत्वपूर्ण अंग भइकन पनि धेरैलाई यसका बारेमा ख्यालै नरहेको मुटु रोग विज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीले बताए । ‘मुटु स्वस्थ भएमा मान्छे दीर्घजीवी हुने हो, तर यसलाई कसरी स्वस्थ रख्ने भन्ने बारेमा धेरैलाई थाहा नै छैन । अरु त के मुटु शरीरको कहाँनेर हुन्छ भन्ने नै थाहा छै्रन । मुटु छातीको बीच भागमा हुन्छ । तर धेरैले देब्रे या दाहिनेतर्फ हुन्छ भनेर बसेका हुन्छन्’ डा.रेग्मीले भने ।
मुटु कहाँ हुन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा छाती चस्केमा धेरैले मुटुको कारणले नभई अन्य कारणले चस्केको हो भन्ने सम्झने गरेको उनले बताए । ‘त्यसैले छातीको बीच भागमा असजिलो भयो भने त्यो मुटुमा समस्या आएका कारणले हो या ग्यास्टिकले हो अन्य कारणले होइन भन्ने कुरामा कुरा ख्याल राख्ने गर्नुपर्छ’ डा.रेग्मीले सुझाव दिए ।
मुटु रोग अहिले नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै मृत्युको मुख्य कारक बनेको छ । तर मुटुमा समस्या भए नभएको बारेमा लक्षण देखिन छाडेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । चिकित्सकहरुको आग्रह छ ‘३० वर्ष नाघेपछि मुटुको नियमित परीक्षण गराआँैं ।’ मुटु रोग सुरूमै पत्ता नलागेमा मान्छेको मृत्यु या अपाङ्ग अवस्थामा पुग्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
मोटोपना पनि रोग निम्त्याउने कारण बन्दै गएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । ‘मोटो भइयो भनेर मख्ख नपर्नुहोस, मोटो भएमा नियमित रक्तचाप र मधुमेह परीक्षण गराउनुहोस्’ सोही कार्यक्रममा सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रकी जनस्वास्थ्य अधिकृत सम्झना शाक्यले आग्रह गरिन् ।
महिलाहरु मुटु रोगको चपेटामा पर्दै गएको शाक्यको भनाइ थियो । ‘तर महिलालाई पनि मुटु रोग हुँदैन भन्ने धारणा हाम्रो समाजमा छ’ उनले भनिन् । महिलालाई छाती नदुख्ने गरेर हृदयघात (हर्ट अटेक) हुने गरेको उनले बताइन् । ‘छाती नदुख्न पनि सक्छ, यसैले महिलाहरुलाई पनि मुटु रोग भयो भन्ने हेक्का धेरैले राख्दैन’ शाक्यले भनिन् ।
गर्भावस्था तथा महिनावारी बन्द भएपछिको समयमा महिलालाई मुटु रोग हुने सम्भावना बढेर जाने उनले बताइन् । ‘त्यसैले यस्तो बेलामा मुटुमा समस्या छ छैन भनेर परीक्षण गर्नु धेरै राम्रो हो’ शाक्यको सुझाव छ । कुनै लक्षण कुर्न थाल्ने हो भने अवस्था भयावह भएर जाने उनको भनाइ छ ।
‘विश्वमा सवैभन्दा धेरै मान्छे मुटु रोगका कारण मर्ने गरेका छन् । तर मुटु रोगको लक्षण देखिन छाड्यो । त्यसैले लक्षण कुर्न थाल्ने हो भने धेरै ढिला हुन्छ । नियमित परीक्षणबाट सुरूमै पत्ता लगाइएन भने मुटु रोगले हृदयघात वा मस्तिष्कघात गराएर ज्यानै लिने वा अपाङ्ग बनाउने खतरा हुन्छ’ मुटु रोग विज्ञ डा.प्रकाशराज रेग्मीले आग्रह गरे ।
‘स्वस्थ्यकर खाना, व्यायाम, प्रणायम र सकारात्मक जीवन पद्धति मुटु रोगबाट टाढा रहने मुख्य विधि हो । यसलाई अपनाउन अबेर नगरौं’ रेग्मीले आग्रह गरे । बोसो, घिउ र धूमपान मुटुको दुस्मन भएको उनले बताए । अन्नमा भन्दा सागपात र गेडागुडीमा जोड गर्न जनस्वास्थ्य अधिकृत शाक्यले आग्रह गरिन् । तनावबाट मुक्त रहने विधि अपनाउन उनले सुझाव दिइन् ।